Date My Pet » Ini Ona Munhu I Like – zvino chii?
Last updated: Jan. 26 2020 | 5 Maminitsi verenga
saka, unofanira dzakasaina kusvika vaviri kudanana nzvimbo uye chaizvoizvo akawana vanhu vashoma dzaunoda kuziva zviri nani… pamwe kunyange zuva. Unoita sei zvino?
tsime, unogona kuisa yako Profile uye kumirira mumwe munhu kuti kuonana iwe, asi iwe unenge pamwe unobudirira nani zvikuru kana iwe tanga. Kana ukawana munhu chinonakidza uye kunzwa kutaura “Hey”, musava Nokunyara! Kuti munhu anogona chaizvo rudo kunzwa kubva kwamuri. Shure kwezvose, ivo akasika munhu Profile, sezvinongoita iwe, netariro Rokusangana munhu. Chokwadi vachange hamuzivi kutoti iwe utaure navo uye uzive.
Ladies, usanyara – Varume vanoda kutevera!
Unoita sei kutanga kuonana?
Rakajairika nzira kuti abate mumwe ari email, mashoko pakarepo, kana 'kuchonya'.
Ini dzinorumbidza nokuponesa pakarepo mameseji kusvikira waita vakatsinhanisa munhu na mashomanana nokuti kunokupa nguva yakawanda yokufunga zvauri kuzotaura uye kuwana vanonzwa kuti mumwe. Kamwe wasvikako zvakawanda kujairana mumwe, zvino unogona kutanga kukurukura.
Kana usina akabhadhara nhengo, zvauchasangana Ungangove kunofanira kungoitirwa kushandisa 'anotsinzina’ kana 'kunyemwerera’ kana chimwe chinhu chakafanana. Ava zvomumagaba mashoko uchati zvakada “Nancy anokuda iwe” kana “Joe winked kwauri”. Anotsinzina uye kunyemwerera ndiwo kukurumidza nzira kutaura kwaziwai asi zvikuru kukutadzisa mano ako pique mubereko munhu. Izvi unoisa yakawanda kumanikidza kuva aidzvinyirira Profile nokuti achava kuita zvose wega wako here.
Email zvakanaka pakutanga.
Emailing anogona musi zvizhinji akafanana kworudo. Chinangwa chekutanga e kuti vavabatsire kupindura, kuvhura kukurukurirana. Unoda kuwana kwavo kufarira asi kuzvisiyira kuvhura yapera kuitira kuti achapindura kwamuri. Chengeta na venyu pfupi uye fadza. Another muromo: regai kutumira yakawanda pamusoro na mumwe munhu, kutevera kukurumidza kwavo uye edza kuramba. (Kana ivo tuma 4 Svondo, iwe tuma 4 kana saka pavhiki.)
Saka Sei Nyora Kuti First Email?
Apo achipindura pachedu Kushambadzira, edza kuva, tsime, personable. Nyora kanenge imwe ndima kana vaviri nezvako uye chii chaunoda nezvavo kana ravo pachavo AD. Vakawanda nhungamiro Profile kunyora zvinoshanda paemail, akadai kugara zvakanaka, nokuva akatendeseka, uye Kunyatsoteerera chiperengo uye girama.
Kuonana munhu paIndaneti zvinonakidza chaizvo uye zvinogona kuita kuti unzwe somunhu rudo akarova kuyaruka, asi ita zvaunogona kwete kuridza somumwe. Vazhinji vedu vari kutsvaka munhu zviri zvishoma zvikuru vakura, munhu kuti ane zvinogona kuva kwoupenyu hwose. Paunotanga kutanga kukurukurirana nomunhu, hapana chakaipa flirtation, kufara, uye vachiseka, asi iva nechokwadi chokuti hazvina pamusoro. wo, musatanga nokudururira mweya yenyu, achimuudza kuti zvose pamusoro wawakarambana naye kana Aimbova kukosha zvimwe. Dzivisa kutaura pachavo zvinhu zvakadai matambudziko emari, utano nyaya, kana nyaya dzinoparadzana mhuri yako. Ichi turnoff rakakura, uye nzira yakanakisisa unozvidzinga munhu kure. Save mataurire wako China usiku pokeria mutambo kana zuva mugeri. Kana uri mubereki ari oga, zvishoma kukurukura pamusoro vana vako kwazvo isununguke uye kuwana pamunowirirana, asi yeuka uchiedza kuvaka kudanana kubatana, saka vanorichengeta zvakare kushoma.
Nguva dzose kuva akatendeseka!
Kana ukama kunoita mberi, chokwadi vachabuda pakupedzisira. Zviri nani kuva uchizvivaka mberi pane kuudza mano nhema pakutanga, chete kuti kuwanikwa panze uye vane zvinogona ukama isaparara.
Chokupedzisira chinhu munhu anoda kuti atumire shoko munhu uye mhinduro, inzwai zvose pamusoro wavo kare akakundikana ukama, zvinetso zvoutano, kana nhamo dzemari. Unogona kugoverana nhamo nokusuwa pashure pakuziva mumwe zvishoma. Kana nani asi, chete akaisa zvose zvinhu shure iwe uye kupfuurira. Hapana nguva akafanana chipo kutanga matsva!
Kurumbidza chinhu iwe wakawana zvinonakidza kwavo Profile.
Izvi ndipo zvakakosha kuverenga hwemunhu Profile. Rinopa zvose kutaura pamusoro pako. Semuyenzaniso, kana uri mukadzi uye uchiona munhu anonakidza uye ane Labrador imbwa semi, ungati zvakada, “Mhoro. Ndinonzi Mary uye ndakaona yako Profile kuti une Labs. Ndinoita zvakare!” kubva ipapo, kupa tsananguro pfupi imbwa yako, taura kuti imi inganakirwa kunzwa shure, uye wemasaini kure.
Dzivisa kunoratidza kuda zvepabonde mashoko.
Regai kuuya vakakukurira pakutanga zvepabonde innuendos uye musaedza vataure munhu Photo. Find chinhu zvishoma 'yakadzika’ kuti vataure, zvichida chinhu vakati vari tsananguro dzavo.
Tsvaka nzira kuramba kutaurirana.
Pfungwa huru yokutanga e nderokuziva kuti akuone uye kupindura kwamuri. Usakanda mapfumo pasi mashoko akawandisa, asi uti kwavari zvakakwana kuti andodzitora vanofarira. Uri kuedza kuwana kukurukura kuenda, saka kubvunza mibvunzo ipfungwa yakanaka, chero hamukumbiri zvakawanda.
Taura zvinhu zvauinazvo zvakafanana, uye mubvunzo kana vaviri pamusoro pavo.
Semuyenzaniso, paunotanga kutanga mameseji nemunhu, unogona kubvunza, “Ko iwe chinhu mafaro svondo rino?” “Une zvikuru urongwa kwevhiki?” Izvi zvichakubatsira kuti udzidze zvakawanda pamusoro munhu asina nokunenge Nosy. Mushure wanga uchikurukura munhu chaiye kwekanguva, unogona kushandisa mibvunzo mhosva kuona kana ungawana pakazaruka nguva apo vaviri ungasangana.
Edza kusiyana tsamba refu zvishoma mashoko yamungakurukura bhowa.
Ramba kusvikira, asi edza kuita kuti unhu hwako chipenye kuburikidza. Zvadaro, Murairo gunwe yakanaka “compliments uye mibvunzo.” Nomwoyo wose kurumbidza pamusoro munhu zvakaitwa, kunyora Style, kana zvinangwa upenyu vachati zvizhinji.
Heano vaviri zvakanaka, aizi Starter yenyaya:
Kana uchigara munzvimbo iyoyo, vataure nharaunda, kana chinhu chokuita nayo. Kana musingadi kurarama munzvimbo iyoyo, unogona kubvunza mibvunzo pamusoro yavachapira.
Music uye mafirimu ndiwo yakanaka kukurukura-Starter; munhu wese anoda mimhanzi kana firimu vamwe mhando.
Pamwe iwe akaenda imwe kukoreji kana nani asi, akwikwidzane chikoro. Ainyomba yokwikwidzana kuzvikoro anogara nzira inofadza isununguke.
Uye chiratidzo chokutanga zita renyu chairo…
Kana kushanda kodzero iyi, munhu achava kutaura iwe shure. yeuka, kunyange kana iwe kuwana mhinduro, uchava kuchengeta kwavo kufarira. Munguva na anotevera, muchibvunza mibvunzo uye murambe complimenting (vachiramba akatendeseka uye zvakanaka). Paunenge wakasununguka, unogona kuchimwe zvikuru ukama hwepedyo dzokukurukurirana nadzo wakafanana pakarepo mameseji, runhare, uye pakupedzisira, vaiungana munhu.
Kana zuva sezvainofamba uye hauna kunzwa kubva kwavari, pane inundate yomunhu mailbox nemashoko, siya munhu pfupi, chinonhuhwira shoko rinopa duku ruvhevhe kuti pave naye kuti vapindure.
Usapa zita rako rakazara, pachako kero ye email, kana runhare nhamba iyi kwokutanga Email; umirire kusvikira waroora zvose vaifarira uye zviri pachena kuti kuenda kune imwe nzvimbo.